Isinqumo se-Icasa sizodala umonakalo emnothweni, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Isinqumo se-Icasa sizodala umonakalo emnothweni, kuloba uBusi Mavuso
NGAPHEZU kwakho konke okunye, osomabhizinisi manje sekufanele bakhathazeke ngokuthi kungenzeka kunciphe isivinini okudonswa ngaso umoya wokuxhumana ngeselula.
Yize kunezexwayiso ngomonakalo ongadalwa yiloku emnothweni nasekulweni nobhubhane (iCOVID-19), inhlangano eyengamele ezokuxhumana eNingizimu Afrika (i-Icasa) iyaqhubeka necebo layo lokunqamula ukutholakala kwe-spectrum sesikhashana ekupheleni kukaNovemba.
Loku kuzokwenza kube lukhuni ukuthi izisebenzi zikwazi ukusebenza nokuxhumana kahle uma zisekhaya, nokuzophoqa izinkampani ukuthi zithi izisebenzi azibuyele emsebenzini, noma zihlabe ikhefu noma ziphelelwe ngumsebenzi.
Lesi sinqumo se-Icasa sizwela kakhulu emabhizinisini asembonini ye-business process outsourcing, nokuyiyona ngxenye yomnotho ekwaze ukunyusa isibalo sabantu abaqashiwe njengoba kuhlasele ubhubhane. Le mboni ithembele ekutheni umoya wokudonsa i-internet nowokuxhuma amaselula usebenze kahle ukuze izisebenzi zizosebenza kahle uma zenza imisebenzi efana neyasema-call centre.
Umoya wokudonsa i-internet nokuxhuma amaselula ubaluleke kakhulu nasemalokishini lapho bengebaningi khona abantu abanezingcingo zasendlini nasebantwini abayitoho abangadingi izindleko zokuzibophezela ezivumelwaneni zesikhathi eside ukuze bakwazi ukuxhumana kahle nabantu.
Ngesonto elidlule ngibhale ngomonakalo lesi sinqumo esizowenza. Umnqamulajuqu wasekupheleni kukaNovemba ususondele kodwa asikaze sizwe lutho kuhulumeni ngalesi sinqumo.
I-spectrum yesikhashana yethulwe njengokuhambisana nemithetho yokukhahlamezeka (i-National Disaster Regulations) ngenxa yokubheduka kobhubhane ngonyaka odlule. Ingenye yezinto ezinhle ezisetshenzisiwe ukulwa nalesi sifo njengoba bekudingeka nokuthi kuhlinzekwe ngamaziko ezemfundo amahhala nezinsizakufundisa ukuze abafundi bezokwazi ukuqhubeka nezifundo zabo besemakhaya.
Ibe mqoka futhi nasemizamweni yokugoma abantu njengoba noma wubani ubekwazi ukubekisela ukuyogoma ngocingo lwakhe mahhala esebenzisa ama-website omNyango wezeMpilo. Konke loko kuzophela uma kunqamuka le layisensi yesikhashana.
Lesi sinqumo sesinciphise nethemba emkhakheni okukhula ukubaluleka kwawo emnothweni – umkhakha wama-call centre. Ukukhuluma kahle isiNgisi kwabantu baseNingizimu Afrika nendlela izikhathi zayo ezimi ngayo uma kubhekwa iMelika, i-Europe ne-Asia sekwenze yakwazi ukwakha amabhizinisi amakhulu anamakhasimende emhlabeni jikelele. Isibonelo nje salokhu yi-Amazon, okuthe ngonyaka odlule yaqasha abantu abawu-3 000 ehhovisi layo eliseKapa nababhekelela amabhizinisi ayo nakwamanye amazwe.
Isiyonke le mboni ye-business process outsourcing eNingizimu Afrika iqashe abantu abawu-270 000 kodwa iMcKinsey ilinganisa ukuthi lesi sibalo singakhula sifinyelele ku-775 000 ngo-2030, ingxenye enkulu yawo engabe ibhekelela amazwe aphesheya kwezilwandle. Loku kusho ukuthi yinkulu imali eqhamuka kwamanye amazwe eyingenisayo.
Eminyakeni eyisithupha edlule, le mboni ikhula ngo-24%. Kodwa ithembele kakhulu ekusebenzeni ngendlela kwezokuxhumana ekukwazini ukuxhumana kahle nomhlaba wonke nokuthi izisebenzi zikwazi ukwenza umsebenzi wazo. Yize izisebenzi zingabuyela emahhovisi kodwa izwe lisavaliwe ngokwesigaba sesibili, nokuyisigaba okusadinga abaqashi bagqugquzele izisebenzi ukuthi zisebenzele emakhaya.
Njengoba nje imisebenzi ekhona isengaphansi ngo-700 000 kulena ebikhona ngaphambi kokuhlasela kobhubhane, akusona isikhathi sokwenza izinto ezizokwehlisa ithemba ezingxenyeni ezivula amathuba emisebenzi. Impela kumele senze konke okusemandleni ukulekelela ukuthi umnotho uvuseleleke.
Okuyikona esikudingayo yisixazululo okungesona esesikhashana enkingeni yokushoda kwe-spectrum eNingizimu Afrika, nokuyimizamo osekuphele iminyaka engaphezu kweyishumi iqhubeka kodwa elokhu iphazanyiswa yindlela imigomo eshaywa ngayo nokugqigqisana ezinkantolo. Le spectrum yesikhashana kumele iqhubeke kuze kutholakale isisombululo.
Isinqumo se-Icasa nge-spectrum yesikhashana singandisa amacala ebhekene nawo. Umthetho uyayiphoqa i-Icasa ukuthi ibhekelele izidingo zabantu okuyibona abasebenzisa lezi zinto uma yenza izinqumo kodwa angiyiboni into okungathi ikhombisa ukwenze njalo kuloku. Kuzokwenza kube lukhuni ukuthi abantu bathole ulwazi lokulwa nobhubhane futhi kube nzima kakhulu ukuthi basebenze ngendlela ephephile.
Nakuba i-Icasa kuyinhlangano ezimele kodwa ngiyamangala ukuthi asikaze sizwe osopolitiki bekhala ngaloku, ikakhulukazi uma ubheka ukuthi ukhetho lohulumeni bezindawo lusemnyango. Ukuthi kungenzeka kunqamuke indlela abantu abaxhumana ngayo yinto leyo abavoti abazoba nendaba nayo.
Ngishilo ngesonto eledlule ukuthi silindele ukuthi zande izinkampani ezizophoqa izisebenzi zazo ukuthi zigome ukuze ukusebenza kubuyele kokwejwayelekile futhi kunciphise namathuba okuvala ngomuso.
Mhlawumbe sesifikile isikhathi sokusebenzisa izimvume ezihambisana nokuthi umuntu ugomile yini. Akudingi ukuthi loku kube yinto eyenziwa unomphelo, zingayekwa uma sesifinyelele esibalweni esanele sabantu abagomile abawu-42 million.
UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa
Asisebenzise ulwazi esinalo ukwakha izimboni zethu, kuloba uNtokozo Biyela
Okwamehlela elungiselela umngcwabo akafisi kwehlele abanye. Yingakho esesungule i-app yokuhlela umngcwabo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA